Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ụlọ ọrụ nri nri na-arị elu na ijeri
Na 2020, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa karịa mgbe ọ bụla na-ekpebi ịtụ ngwa nri na nri na ihe ọ drinksụ drinksụ ndị ọzọ n'ịntanetị iji zere ịzụ ahịa nri n'ụlọ ahịa juru ebe niile, ebe enwere ike kpughee ha na nje COVID-19.
Uto gara n'ihu site na 2021 ka ndị na-azụ ahịa na-ele anya ngwa nri na ngwa ahịa e-commerce dị ka ụzọ dị mma maka ịzụ ahịa nri na atụmatụ nri. Na Mọnde, Kroger kwupụtara na ngwa nri ya na azụmaahịa nri a kwadebere n'ụlọ karịrị ijeri $ 1 ijeri ahịa kwa afọ ka ndị na-azụ ahịa na-achọ ụzọ nri ga-adaba adaba n'oge ọrịa a.
Dị ka Packaged Facts analyst Cara Rasch si kwuo, akụkọ a gbasara Home Chef abụghị ihe ijuanya. "Dị ka ụlọ ọrụ ngwa nri ndị ọzọ, Home Chef enwetala uru ahịa siri ike n'oge ọrịa a ka ndị mmadụ na-etinyekwu oge n'ụlọ ma na-achọ ụdị dị iche iche n'oge nri abalị. Dị ka otu n'ime ndị isi ahịa ngwa nri, Home Chef etinyela aka na usoro ndị ahịa nke isi nri na iri nri karịa n'ụlọ iji nweta ọnụego uto 118% maka mmefu ego 2020.
Ngwunye Eziokwu 'June 2021 Nnyocha ndị ahịa n'ịntanetị na-achọpụta na maka ndị na-eji ọrụ nnyefe ngwa nri, isi ihe kpatara ime ya bụ ịdị mma, na-enwe mmasị n'ịhazi nri maka ha, na ịnwale ihe ọhụrụ/gbanwee nri. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-eji ngwa nri na-akọkwa na ha na-eji ngwa nri n'ihi na ngwaahịa ndị a na-azọpụta ha oge na nkwadebe nri.
Rasch na-ekwu, "Ngwa nri na-anọchite anya uru bara uru maka ndị na-azụ ahịa na-arịa ọrịa nhazi nri ma ọ bụ ịzụ ahịa ihe oriri bụ ndị ka na-achọ nri esi nri n'ụlọ, ebe ha na-ebelata oge a na-eji na-achọ ntụziaka na ịzụrụ ihe oriri."
Rasch gara n'ihu, "ike ọgwụgwụ ọrịa na 2020 na 2021 emeela ka ọtụtụ ndị na-achọ nhọrọ ọhụrụ iji nweta nri na tebụl. Ngwa nri na-adọrọ mmasị ndị na-azụ ahịa n'ihi na ha na-ebelata oge a na-etinye na nhazi nri na ịzụ ahịa ihe oriri. Ha na-ewepụkwa ihe mkpofu nri, n'ihi na nri niile nwere ihe ndị e kewara nke ọma nke ezubere maka otu uzommeputa.”
Ọzọkwa, Rasch rụtụrụ aka na ngwa nri enyerela ụfọdụ ndị na-azụ ahịa aka imeziwanye nka nri ha n'oge ọrịa na-efe efe ka omume iri nri na-aga n'ụlọ. "Maka ndị na-enweghị ọtụtụ nkà isi nri, ngwa nri abụwo ihe na-azọpụta ndụ n'ịkụziri ha ka ha na-esi nri site na ntụziaka dị mfe, nke nzọụkwụ site na nzọụkwụ ka ha chọtara mkpa ma ọ bụ ọchịchọ ka ukwuu isi nri n'ụlọ."
Ka o sina dị, ọrụ nnyefe ngwa nri bụ obere niche. Eziokwu ngwugwu 'June 2021 Nnyocha ndị ahịa n'ịntanetị na-achọpụta na naanị 11% nke ndị na-azụ ahịa na-akọ site na iji ọrụ nnyefe ngwa nri n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga.